Iyo Nyowani COVID Chokwadi Paunenge uchibhururuka muUS makore makumi maviri mujeri reFederal reKubvutira kana Kupwanya kweMask.
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Iyo Nyowani COVID Chokwadi Paunenge uchibhururuka muUS makore makumi maviri mujeri reFederal reKubvutira kana Kupwanya kweMask.
Airlines • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Sekureva kweFAA, zviuru zvina mazana matatu nemakumi mashanu neshanu zvemitemo yevatakuri isingadzoreki yakaiswa mukati megore muUnited States. Kunze kweizvi, 4,385 masiki ane hukama nezviitiko zviitiko. Kuvhiringidza vashandi vekubhururuka imhosva yakakomba, asi inofanirwa kunge iri mhosva pasi pePatriot Mutemo nemitongo yemakore kusvika kumakumi maviri emakore? Mutungamiri weU.S. based Flyers Kodzero Paul Hudson haafunge kudaro.
Kanganwa kutenderera kwenzanga kana uchikwira nendege yekumba muUnited States.
Vapfuuri vanopokana nemitemo yazvino uye kupopota pavanenge vari mundege vanogona kutongwa pasi pePartriot Act yakatarisana nemakore makumi maviri mujeri remubatanidzwa.
Vashandi vekubhururuka muU.S. vari kudzidziswa nevanhu vamwe chete vanodzidzisa varindi vemajeri - kwete yakawanda yekuedza kwekuwedzera.
Matenga ane hushamwari muUnited States anogona kunge asingatombove nehushamwari sezvavaive mune yakanaka yekare PAN AM nguva.
Federal Air Marshals vari kudzidzisa varindi vekubhururuka maitiro ekuita nenjodzi iri kukura yevatakurwi vanove vanorwa uye vane chisimba, kazhinji pamusoro pemitemo-yechiso.
Zvibvumirano zvinowanzosimbisirwa pendege dzepasirese, kusanganisira zvigaro zvepakati zvakavhurika, kusimukira munhandare dzendege, nemitemo yekudzivirira, hazviwanzo kushanda kuUS ndege dzekumba.
Vazhinji vanofamba mudzimba muUnited States vanoramba kutevera mitemo yekupfeka masiki nekuda kwezvematongerwo enyika, zvechitendero, uye zvimwe nekuda kwehutano. Izvi zviri kukonzeresa kuwanda kwezviitiko, izvo zvinomhan'arwa kuFederal Aviation Authority (FAA)
Kubhururuka muzera re COVID-19 kunonetsa kune vafambi nevashandi, uye kwakaguma nezviitiko mazana matatu nemakumi masere nematatu zvine chekuita nemask zvakataurwa kuFAA. Tichifunga chete makumi mana nemazana mana nemakumi mashanu neshanu emishumo yevatakuri vasingateedzere yakamisikidzwa mugore, iyi nhamba yakakura kwazvo.
Kuti vatakuri vatungamirirwe, zvakurukurwa muImba kuranga zviitiko zvine chekuita nevatakurwi zvakaomarara sekubavha. Iyo Patriot Act yakaiswa munzvimbo muUnited States mukupindura kurwiswa kwehugandanga, kwete mukupindura munhu anonyunyuta. Kutyora Mutemo wePatriot kunouya nemutongo wemakore makumi maviri ejeri.
Paul Hudson, Mutungamiri we Flyers Kodzero, anga ari an mutsigiri mutsigiri yekodzero dzevapfuuri uye inoti zvakwana.
Mhinduro naFlyersRights.org kune iyo Imba Aviation Subcommittee pamusoro pekuwedzera kweNhamba Yezviitiko zveAirline
Iko kuwedzera kwazvino kwezviitiko zvechisimba mukufamba nendege inyaya yakakomba inoda mhinduro. Iyo subcommittee kunzwa yaizobatsirwa nekunzwa maonero emufambi. FlyersRights.org yakaendesa mutemo wekutonga kuDhipatimendi reZvekufambisa muna Nyamavhuvhu 2020 yekuraira mask-kupfeka mukufamba nendege. FlyersRights.org rave riri iro rinotungamira sangano richikurudzira matanho ekuderedza eCOBV ekuti kufamba kwemhepo kuve kwakachengeteka.
Sekureva kwedatha yazvino yeFAA, zviitiko zvine chekuita nemask zvine nhoroondo ye73% yezviitiko zvese zvakaziviswa nevashandi mu2021. Panguva imwecheteyo, zviitiko zvisina hukama nemasikisi zvakaderera, uye iyo FAA yakawedzera zvakapetwa kaviri huwandu hwayo kuferefeta. FlyersRights.org inotsvaga mhinduro dzinotevera dzekudzora huwandu hwekukanganiswa zvine chekuita nemask mundege:
Tevedzera yero kadhi system apo mufambi anopiwa yambiro yakanyorwa uye kugona kutumira kunyunyuta kwakanyorwa kune mutyairi kana nendege senzira yekukwira-kukwira.
Iva nechokwadi chekuti varindi vekubhururuka ivo pachavo vanotevedzera uye nekuramba vachiteedzera iyo masiki mitemo.
Bvumira kurerukirwa kwakanyanya kwekuwana zviri pamutemo hutano uye hurema kunze kwemutemo wemask.
Shandisa matanho makuru ekuderedza COVID, kusanganisira kupindirana kwevanhu uye kutarisa kwekushisa. Kusimuka kwemagariro kunofanirwa kumanikidzwa kwete kwete chete mundege, asi pagedhi, panguva yekubhodhi, uye kunzvimbo dzekuchengetedza.
Wongorora zvakare iyo TSA mask mvumo yekuwedzera neyeveruzhinji chiziviso uye yekuita maitiro.
Idzo ndege dzakamanikidza vafambi pane dzinoverengeka dzendege dzisina kuremara munharaunda, isina chigaro chepakati, isina ganhuriro yemagetsi, hapana kutarisa tembiricha, uye hapana kuyedzwa kwe COVID. Nepo vamwe vafambi vachipokana nemasikisi nekuda kwezvikonzero zvematongerwo enyika, vamwe vanoona kushomeka kweimwe nzira-yekuchengetedza chengetedzo yakatorwa nendege (kuremara munharaunda, kuvharira chigaro chepakati, kuongororwa kwekupisa) uye kushomeka kwekusimbirira kune vanofamba nendege.
Kutongwa kwebhatiri kunodiwa kana zviitiko izvi zvikaita zvechisimba. Zvisinei, kwaizove kuwedzera kwakanyanya uye kukanganisa kwakanyanya kune rusununguko rwevanhu kukumbira mhosva yePatriot Act "kupokana nenhengo dzevashandi vekufamba nendege nevashandi vendege" inoitirwa vapambi uye kutyisidzira mufambi ane makore anosvika makumi maviri mutirongo.
FlyersRights.org yakatsigira mutemo wemask pamwe nedzimwe nzira dzehutano dzekudzivirira vafambi nevashandi. Nepo vazhinji vanoshanda nendege vachisimbisa mutemo wemask zvakanyanya sezvavanogona pasi pemamiriro ezvinhu, vazhinji vanoshanda mundege havaedze kuita uye ivo pachavo vanotyora mutemo wemask.
FlyersRights.org yaisazopa zviito zvevashoma vevashandi vendege kuboka rese. Nekudaro, sekumanikidza kwekutora danho rinofanira kutorwa kune vafambi vanoramba kupfeka chifukidzo, matanho anofanirwa kutorwa kunangana nevapambi vendege vanotyora mutemo wemask kana vasina basa rekumanikidza mutemo. Izvi hazvisi izvo chete zvinobatsira kudzikamisa zviitiko zvinonyangadza zvevapfuuri, asi zvakare zvakakosha kuti hutano hurambe huripo hwevose vafambi nevashandi vekubhururuka mukati medenda iri.